Danjire Ameeriko”Safaaraddu wax badan ayeey ka qabataa dhibaatada heysata Jaaliyadda ku nool Kenya” | Radio Muqdisho	Wednesday, June 19th, 2013	Bogga Hore
Danjire Ameeriko”Safaaraddu wax badan ayeey ka qabataa dhibaatada heysata Jaaliyadda ku nool Kenya”
Published on October 17, 2012 by Mowliid · 1 Comment · 881 views
Danjiraha Soomaaliya ee dlka Kenya ayaa sheegay in uu dadaal dheer ugu jiro sidii hey’adaha gargaarka ee fadhigoodu yahay Nairobi ay ugu soo guuri lahaayeen Magaalada Muqdisho.
Danjiraha Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Nuur Ameerico oo xalay ka qeybgalay barnaamijka Bandhigga wareysiyada ee ka baxa Radio Muqdisho ayaa sheegay in safaarddu ay dadaal dheer u gashay sidii ay ugu qancin laheyd hey’adaha ka shaqeeya gargaarka Soomaaliya ee fadhigoodu yahay Nairobi in ay u guuraan magaalada Muqdisho si ay fursad shaqo uga helaan dadka Soomaaliyeed intii qarashkaasi uu ku lumi lahaa dalka Kenya, isagoo xusay in arrintaasina ay meel wanaagsan u mareeyso.
Dhinaca kale Danjiraha oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in dowladda Kenya uu kala hadlay in safaardeeda ay Muqdisho dib uga furato, si ay u daboosho baahida dadka Soomaaliyeed ee u safraya dalka Kenya, isagoo tilmaamay in dowladda Kenya ay ka aqbashay arrintaasi maadaama laga baxay xilligii KMG ahaa.
Danjire Ameerico ayaa hoosta ka xariiqay in safaaraddu ay wax badan ka qabatay dhibaatooyin farabadan oo lagu heyn jiray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya, isagoo tilmaamay in kuwa falalka amnidarrada ah ka geysta Kenya aysan aheyn Soomaali taasina waxa lagu ogaaday ayuu yiri qaraxyadii ka dhacay Nairobi iyo Mombasa oo dadkii loo qabtay aysan ku jirin Soomaali.
abdulkadr says:	October 18, 2012 at 1:57 pm	ma sha allaahı allaah haku dhaafo
shaqo wanagsan ayadu qabta somalıda akhı
garabkaag allaah ha galo hana ku xıfdıyo
Wararka	Arday Soomaaliyeed Oo Shahaadooyin Lagu Guddoonsiiyay Dalka South Africa”Sawirro”
Taliayah hogaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowlada Soomaaliya ...	Tubta Toosan	Barnaamijka Tubta Toosan Hal-Abuurnimada Soomaalida